बोक्रासँगै फलफूल खानुका यस्ता छन् फाइदा ! « Lokpath
२०७७, २० पुष सोमवार २०:११
बोक्रासँगै फलफूल खानुका यस्ता छन् फाइदा !
प्रकाशित मिति : २०७७, २० पुष सोमवार २०:११
काठमाडौं । सकेसम्म फलफूल खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकोमा कुनै द्वीमत छैन । तर हामीले खाने त्यस्ता फलफूलको बोक्रा छोडाएर खानु कति फाइदाजनक छ विचार गर्नु पनि आवश्यक छ ?
कीटनाशक औषधीको असरबाट जोगिन वा देखासिकी वा बानीका कारण अधिकांशले बोक्रा हुने सबै फलफूलको बोक्रा छोडाएर खाने गर्दछन् ।
तर यसरी बोक्रा छोडाएर खाँदा कतिपय अवस्थामा हामीले त्यसको सबैभन्दा पोषक तत्व फ्याँकिरहेका हुन्छौँ। बोक्रामा पाइने पोषक तत्वको मात्रा कुन खालको फलफूल हो त्यसमा भर पर्दछ ।
सामान्य रूपमा भन्दा बोक्रा नछोडाएका फलफूलमा बढी मात्रामा भिटामिन, खनिज र अन्य पोषक तत्वहरू हुन्छन् ।
त्यस्तै फलफूलभन्दा तिनका बोक्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट ३ सय २८ गुणा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले फलफूल बोक्रैसँग खाए हामीले पाइरहेको पोषण भन्दा धेरै पाउँदछौँ ।
बोक्रासहित फलफूल खाँदा बोक्रमा भएको फाइबरको उच्च मात्राले हामीलाई छिटै भोक लाग्न दिँदैन । यससम्बन्धमा भएका अनेकौँ अध्ययनले फाइबरले हामीलाई लामो समयसम्म टन्न राख्ने र छिटै भोक लाग्न नदिने देखाएका छन् ।
फाइबरले हाम्रो पेटलाई तन्काएर वा खाएको भोजन पचाउन बढी समय लगाइदिएर (पाचन प्रक्रियामा ढिलाई गरेर) छिटै भोक लाग्न दिँदैन।
त्यस्तै फलफूलका बोक्रामा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले हामीलाई कतिपय रोग लाग्नबाट समेत बचाउँदछ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा एन्टिअक्सिडेन्टले हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने फ्रि र्‍यडिकल भनिने अस्थिर अक्सिजन कणहरू नियन्त्रण गर्छ ।
शरीरमा यस्ता फ्रि र्‍यडिकलको मात्रा बढ्दा तनाव उत्पन्न हुनुका साथै कोषमा समेत हानि पुर्याउने र रोग लाग्नसक्ने जोखिम समेत बढ्छ।
यी व्यक्तिले ४०० डरलाग्दा जीवलाई घरमा पालेका छन्, हातले खुवाउँछन् खाना !
काठमाडौं । जंगली जनावर धेरै डरलाग्दा हुन्छन् । तर मानिससँग बसेपछि उनीहरु पनि
शुक्रवार तपाईका लागि कस्तो छ ? हेर्नुहोस् आजको